Mbola ho heno ao ve ny hoe “azo raisina fa tsy mitombona ?”. Na koa hoe “tsy Antananarivo irery akory no Madagasikara ?”. Sa hisy fehezanteny hanan-tantara vaovao indray hivoaka eo imolotr’ireo mpitsara izay hisahana ady amin’ny fanjakana izay ? Raha mba fehezanteny mitondra fandriampahalemana sy manafoana hatramin’ny otrikady moa maninona fa tsikaritra tato ho ato aloha dia hita ho fahazaran’ireo mpitondra malaza mihitsy tato ho ato ny manao valin-teny boraingina sy zary mandrangitra ny vahoaka maheno azy. Fehezanteny izay tsy mbola hita ho namaha ny olana mianjady amin’ny firenena aloha hatreto fa vao mainka aza mandentika azy sy hatahorana hampisara-bazana ny samy Malagasy. Hany ka tsy mahagaga raha miha tafiditra malalaka tsikelikely eto ireo fanatontoloana mivoana amin’ny soatoavina eto amin’ity firenena ity. Raha tsy hiresaka fotsiny ny resaka fiarahan’ny mitovy fananahana. Hirariana tokoa anie mba hanao fitsarana haneho fahendrena amin’ny vahoaka ny tribonaly anio mba ho azo antoka fa lalana ho amin’ny fifampidinihana hitondra fitoniana no haterany fa tsy ady sanatria. Kihon-dalana voalohany eo amin’ny tantaram-pirenena io ho amin’ity taona ity ka ny hirariana dia hiravona eto ny ampahany betsaka amin’ny olana rehetra. Mbola sarotra mantsy hono ny fametrahana ny fihavanana eto ka dia enga anie mba ho diso ny fanahiana !